Mogadishu Journal » Dhacdooyinkii Ugu Waaweeynaa Ee Caalamka Ka Dhacay Sanadkii 2012ka.
Dhacdooyinkii Ugu Waaweeynaa Ee Caalamka Ka Dhacay Sanadkii 2012ka.
Suuriya:Bishii February ee sanadkii 2012ka waxaa dalka Suuriya ka bilawday kacdoonka looga soo hor jeedo dowlada u hogamiyo madaxweeyne Bashar Al-asad waxaa ku dhintay dad ad u fara badan kuwo kalana weey ku barakaceen ilaa hadana dagalkasi wa socda.
Nigrer:Dalka Niger waxaa bishii February ee sanadkii tagay ka dhacday abar ad u xun.
Mali:Bishii April ee sanadkii 2012ka dalka Mali waxa afgambi ku qabsaday militariga dalkaasi,
Dr Congo:Bishii May ee Sanadkii 2012ka kooxaha mucaaradka ee M23 ayaa dagaal la galay dowlada Dr Congo waxana ay ka qabsadeen magaalooyin muhiim ah.
Mexico:bishii July ee sanadkii 2012ka waxa doorashadii madaxtinimada ee dalka Mexico ku guuleeystay Enrique Pena Nieto.
England:Bilihii July iyo Augusto waxaa magalada London ee dalka ingiriiska lagu qabtay ciyaarihii Olympic da iyo Paralympic kada oo ay ka soo qeeyb galeen inka badan 205dal.
Greece:Bishii September ee sanadkii 2012ka waxa dalka giriiga soo wajahay dhaqaalo darro aad u xoogan waxana qalqal galay qar ka mid dhaqaalaha wadamada Midowga yurub.
Bishii September ee sanadkii 2012ka waxaa wadamada islaamka ka dhacay mudaharadyo xooga oo looga soo hor jeeday filinkii lagu sameeyay dalka maraykanka ee lagu aflagadeeyay diinta islaamka iyo Nabigeena Muxamed NNKH,waxaana dadkii careeysnaa ay dab qabadsiiyeen safaaradihii ay dowlada maraykanka ku lahayd wadamada islaamka,waxaana dab la qabadsiiyay safaradii ay dowlada maraykanka ku lahayd Magaalada Bengazi ku geeriyoday safiirkii dowlada maraykanka u fadhiyay dalkaasi.
Maraykanka: Bishii November ee sanadkii 2012ka maalmo ka hor inta aysan dhicin doorashadii dalka maraykanka waxaa xeebaha koofureed ee dalkasi ku dhufatay duufaantii Sandy oo qasaaro xoogan geeysatay.
Isla 6dii November waxaa doorashadii madaxtinimada ee dalka maraykanka mar labaad ku guuleystay Madaxweeyne Barack Obama oo ka guuleeystay Mitt Romney oo la tartamayay.
Falastiin:Bishii November ee sanadkii 2012ka yahuuda ayaa weerar todobad socday oo ah cir iyo dhul ku soo qaday marinka Gaza waxaana ku geeriyoooday 130 qof oo falastiiniyiin ah.
China:Bishii November ee sanadkii 2012 waxaa xisbiga hogaamiya dalka shiinaha uu yeeshay Hogan cusub.
Qadar:Bishii November waxaa magaalada Doha ee caasimada dalka Qadar ka dhacay shirkii is bedelka cimilada aduunka.
Masar:Bilihii November ilaa December waxaa dalka Masar ka taagna qalalaaso xoogan oo ka dhashay awoodo dheeraad ah oo uu isi siiyay madaxweeynaha dalkaasi Maxamed Morsi,qalalaasaha ayaa sii xoogeeystay ka dib markii madaxweeynaha uu ku dhawaaqay in afti loo qadaayo dastuur cuusb oo la qoray,waxana dastuurka muranka dhaliyay loo qaaday afti labo wareeg ah,waana la ansaxiyay dastuurka.
Philipines:Bishii December waxaa dalka filipiin ku dhufatay duufaantii Bopha waxaana ku geeriyooday in ka badan 1000 (kun) qof,waxana ay burburisay magaalooyin badan.
Maraykanka:Bishii December nin hubeeysan ayaa iskuul ku yaala magaalada Newtown ku dilay 27 qof oo 20 ka mid ah ay yihiin caruur,tasina waxa ay dhalisay muran ah in hubka laga mamnuuco dalka maraykanka.
Waaxaa diyariyay Elmi Mohamed Ware,
Maxaa Ugu Weeynaa Soomaaliya Sanadkii Tagay Ee 2012ka.
Madaxweynaha Dalka Oo Gaaray Suudaan Kana Qeeyb Galaya Munaasabada 57 Guuradii Ka Soo Wareegtay Xarnimada Dalkaasi.